Taliyaha sirdoonka Soomaaliya wuxuu la shaqeeyay garab ka tirsan al-Qaacida, marka maxaan u maalgelinaa? -
Home News Taliyaha sirdoonka Soomaaliya wuxuu la shaqeeyay garab ka tirsan al-Qaacida, marka maxaan...
Taliyaha sirdoonka Soomaaliya wuxuu la shaqeeyay garab ka tirsan al-Qaacida, marka maxaan u maalgelinaa?
Soomaaliya waxay noqotay god lacagta Mareykanka loogu rido . Sanadihii la soo dhaafay, dowladda Mareykanka ayaa boqolaal milyan oo doolar sanad walba ku daadisay dalka.
Bil uun kahor, Danjire Donald Yamamoto iyo Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa kala saxiixday heshiis lagu yareynayo deynta Mareykanka ee Soomaaliya.
“Markii ay Soomaaliya gaarto heerka ugu dambeeya… Mareykanka wuxuu cafin doonaa in ka badan 1 bilyan oo deyn ah,” ayaa lagu yiri safaaradda. Yamamoto, oo istiraatiijiyad Soomaaliya u qaabeeyay kaaliyaha xoghayaha ka hor jagada uu haatan hayo, ayaa u muuqata inuu rumeysan yahay in lacagaha la soo marsiiyo Muqdisho ay u suuragelin karto dowladda Soomaaliya inay soo iibsato saaxiibbo iyo xulafo.
Inta badan maalgashiga Mareykanka wuxuu ku jiray shakhsiga Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed, oo ay Soomaalidu u taqaano “Farmaajo”, laakiin in badan oo ka mid ah rajada Wasaaradda Arrimaha Dibadda ayaa umuuqata mid meel ku dhacday. Isu dhiibistii madaxtinimada Soomaaliya, Farmaajo wuxuu isu ekaysiiyay wax badan kadib markii adeerkiis (kaligii taliyihii hore ee Siyaad Barre, oo xumaantiisa iyo harraadkiisa awood u horseeday Soomaaliya inay ku fashilanto dowladnimo) marka loo eego dhiirigelin kasta oo la soo ururshay sannadihii uu ku sugnaa Ameerika.
Farmaajo waxaa laga yaabaa inuu madaxweyne noqdo, laakiin malaha ninka ugu awoodda badan Soomaaliya waa Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, oo ah madaxa Hay’adda Sirdoonka iyo Nabadsugida Qaranka. Farmaajo waxaa laga yaabaa inuu isku dayo inuu mideeyo isbahaysi siyaasadeed, laakiin waa Fahad oo ah ninka ugu dadaalka badan Soomaaliya ee looga hortagayo argagixisada iyo, aragti ahaan, barta xiriirka ee u dhexeeya sirdoonka kala duwan ee doonaya inay ka adkaadaan kooxda xiriirka la leh Al-Qaacida.
In Mareykanku sidoo kale la sheegay inuu maalgeliyo hay’adda sirdoonka ee Soomaaliya taasoo ka dhigeysa inuu si toos ah u bartilmaameedsado mareeykanka weyn. Buug-gacmeedka, Fahad sidoo kale waxaa lagu soo waramayaa inuu lacag ka helo Qatar iyo sidoo kale Turkiga sidoo kale.
In maalgashiga noocaas ah uusan bixin wax la yaab leh. Quusin qoto dheer oo ku saabsan taariikh nololeedka Fahad waxay soo jeedinaysaa inuu si wanaagsan u noqon karo ninka gudaha ee al-Qaacida ee dawlada Soomaaliya.
Dukumiintiyada Soomaaliya iyo Kenya ee Fahad (nuqullo ka mid ahna aan haysto) waxay sheegayaan inuu ku dhashay magaalada Mandheera ee dalka Kenya bishii Luulyo 1978, waxyar uun ka soohdinta Soomaaliya, inkasta oo xubnaha qoyskiisu ay sheegeen inuu ku dhashay magaalada Beled Xaawo, ee gobolka Gedo ee Soomaaliya. , sanad kahor.
Qabiillada waa u muhiim Soomaaliya dhexdeeda, Fahadna wuxuu ka dhashay mid yar: Reer Aw-Xasan, waa beel ka mid ah Kalweyne, oo ku urursan gobolka ay Soomaalidu degto ee Itoobiya. Markii uu Fahad ahaa afar jir, hooyadiis Xaliima Saciid Dheere iyo aabihiis way kala tageen, Fahadna wuxuu hooyadiis ka raacay Gedo ilaa Muqdisho, halkaas oo ay degtay magaalo ku taal xaafadda Hawlwadaag ee caasimadda, meel u dhow halka ay dhacdo Black Hawk Down hadhow dhaca.
Fahad wuxuu wax ku bartay madarasooyin taxane ah, oo uu ka mid yahay Macallin Cabdiraxmaan Dheere, agagaarka masjidka Salama, iyo Masjidka Isbaheysiga Islaamka. Inta badan waxbarashadiisii ​​aan quraanka ahayn waxay umuuqataa inuu ahaa mid iskiis wax u bartay halkii uu ka ahaan lahaa mid rasmi ah. Carruurta yaqaanna waxay ku sifeeyaan inuu yahay kelinimo.
Dabayaaqadii sideetameeyadii, Xaliima waxay guursatay Cabdulqaadir Gardheere, oo ka soo jeeda qabiilka Mareexaan. Kuwii yaqaanay Cabdulqaadir waxay ku sifeeyeen inuu yahay qof diinta jecel. Waxaa jiray xiisad bilow ah oo udhaxeysa Fahad iyo aabihiis, oo ku adkeystay in Fahad qaato qaab nololeedkiisa xagjirnimada ah ama lagu tuuro dariiqyada. Ugu dambayntiina, Fahad wuu guntaday, Cabdulqaadirna markiiba wuxuu bilaabay inuu dhallinta Fahad ku barbaariyo xagjirnimada.
Sanadkii 1991, markii uu burburay taliskii Siyaad Barre, Fahad qoyskiisa waxay u qaxeen Kenya sababtoo ah aabaha iyo hooyada labaduba waxay xiriir qabiil la lahaayeen madaxweynihii hore. Waxay magangalyo ka heleen dhowr sano xerada qaxootiga Utanga oo u dhow Mombasa. Utanga, Fahad wuxuu hogaamiye salaadeed ka noqday masaajidka Abu Dujana. Halkaas ayuu kula kulmay Cabdishakuur Cali Mire iyo Gamal Maxamed Hasan, oo labaduba ku lug lahaa al Ittihad al Islamiya, oo Mareykan iyo UN-ku ay ku tilmaameen argagixiso xiriir la leh al-Qaacida.
Xiriirka saddexda qof wuu sii socday: Gamal maanta waa wasiirka qorsheynta iyo horumarinta caalamiga ah ee Soomaaliya, awood uu sidoo kale ku helo lacagta gargaarka Mareykanka, Cabdishakuurna waa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka.
Fahad wuxuu xigay u dhaqaaqay Nairobi, halkaas oo uu wax ku bartay Masjidka Lixaad ee Eastliegh, oo u dhow halka aabihiis oo ku soo biiray al Ittihad al Islamiya, uu ka iibsaday makhaayad. Bartamihii 1997-dii, ciidamada Itoobiya waxay dileen Fahad aabihiis oo adeer u ahaa markii uu ka dagaallamayay Beled Xaawo. Waxay ahayd daqiiqad qaab-dhismeed ah oo kicisay Fahad animation-ka reer Galbeedka, iyo kan Masiixiyiinta ah. Saaxiibbadiis iyo asxaabti xilligaas waxay yiraahdeen wuxuu markaas bilaabay inuu ka sheekeeyo “saliibiyiinta reer galbeedka ee Bariga Afrika.”
Markii uu internetku hawada ka baxay, Fahad wuxuu la wareegay teknolojiyadda cusub wuxuuna si dhaqso leh ugu kasbaday shaqadiisa barta mayalka adag ee waddaniyeed ee lagu magacaabo Somalitalk.com halkaas oo uu kaga hadlay arrimaha siyaasadda, inta badanna laga eego aragtida Islaamiyiinta.
Markaa waxaa jira farqi u dhexeeya howlihiisa guud, iyadoo asxaabta qaar ay u soo jeedinayaan inuu u safray Yemen si uu u sii wato waxbarashadiisa diineed, halka asxaabta kale ay leeyihiin halkii uu u aaday Pakistan. Si kastaba ha noqotee, markii uu ku soo noqday Soomaaliya, wuxuu la kulmay Faarax Sheekh Cabdulqaadir, oo ah nin caan ah oo siyaasi ah, oo ka soo qalin jabiyay Jaamacadda Caalamiga ah ee Islaamka ee Islamabad.
Farah wuxuu baray Wadah Khanfar, oo ay isku fasal ahaayeen Falastiin oo uu tifatiraha guud ka ahaa Al Jazeera, shabakada dayax gacmeedka Qatar. Fahad wuxuu markiisii ​​hore ahaa macallin diimeed carruurta Khanfar laakiin, markii Islaamiyiintu xoog ku qabsadeen Soomaaliya dabayaaqadii 2005 ama horraantii 2006, Fahad wuxuu ku noqday Muqdisho isagoo ah telefishanka Aljazeera. Isla markiiba wuxuu isku muujiyey inuu helo xero tababar Islaamiyiin ah oo ku taal Ras Kamboni, halkaas oo Sheikh Hasan Turki, oo ah halyeeyga al Itixaad al Islamiya iyo aasaasaha al Shabab, uu si shaqsiyan ugu soo booqday xerada. Wuxuu sidoo kale wareystay shaqsiyaad ka tirsan Al Shabab oo waqtigaas gabbaad ka dhiganayay howlwadeenada Al Qaacida ee la doonayay weeraradii 1998 lagu qaaday safaaradaha Mareykanka ee Kenya iyo Tanzania
Intii uu la shaqeynayay Al Jazeera, Fahad wuxuu saaxiibadiisa u sheegay inuu sidoo kale u tababaray la socodsiinta sirdoonka Qatar. Baasaboorkiisa Kenyaanka ah wuxuu u suurta geliyay inuu si ballaadhan u safro isla markaana uu siiyo macluumaad iyo xayeysiin Al Shabaab. Sannadkii 2012-kii, wuxuu bilaabay kaalin firfircoon oo uu ku leeyahay siyaasadda Soomaaliya, isaga oo adeegsanaya lacagta Qatar si uu uga iibsado codadka xubnaha baarlamaanka Soomaaliya.
Waxa uu, ilaa goor dhaweyd, ku faanay doorkan boorsada Qatar iyo sida daaha gadaashiisa fure u ah guusha siyaasadeed. Sanadkii 2016, Fahad wuxuu bilaabay inuu soo dhigo lacagaha Qatar ee lagu taageerayo ololaha Farmaajo, maalgashigaas oo sanadkii xigay laga bixiyay labadaba Farmaajo iyo Fahad, oo ugu dambeyn noqday madaxa sirdoonka Farmaajo.
Doorkaas, Fahad wuxuu keensaday xulafo Islaamiyiin ah wuxuuna eryay xirfadlayaal waardiye gaboobay. Ka dib markii Al Shabaab ay fulisay weerar ay ku dhinteen in ka badan 500 oo qof bishii Oktoobar 2017, Fahad wuxuu heshiis la galay xulafadiisa argagixisada kaas oo ay ku yareynayaan howlgalada ay ka wadaan caasimada iyagoo ku badalaya in sirdoonka ay indhaha ka laabtaan canshuuraha ganacsatada iyo shacabka caasimada. . Waa xiriirkan uu Farmaajo ka dhawaajiyay markii uu ku booriyay Al Shabab inay weeraraan bartilmaameedyada ka baxsan Soomaaliya.
Marka laga soo tago xiriirkiisii ​​hore ee al Ittihad al Islamiya iyo xiriirka dhow ee uu la leeyahay al Shabab, ficilada Fahad waxay muujineysaa inuu wali ku sii nagaado Qatar quo pro quo. Bishii Diseembar 2017, tusaale ahaan, Fahad waxaa la sheegay inuu amar ku bixiyay weerar lagu qaado guriga siyaasiga ay xafiiltamaan ee u tartamaya xilka madaxweynaha halkaas oo ay ciidamadiisu dileen lix waardiye ah ayna qabteen Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, sida muuqata Qatar waxay ku kalsoon tahay xiriirka uu la leeyahay Imaaraadka Carabta. Fahad Qadar iyo xiriirka argagixisada ayaa sidoo kale ku soo baxay saxaafada kadib wicitaan taleefan oo qarsoodi ah oo sheegaya in Qatar ay amartay weerar argagixiso oo lagu qaado Bosaaso, dekedda weyn ee Puntland.
Ku noqoshada Washington: Inta badan, Wasaaradda Arrimaha Dibadda waxay dejisaa siyaasad ku wajahan fikirka rajada halkii ay ka ahaan lahayd xaqiiqda. Isla mar ahaantaana, diblomaasiyiintu way neceb yihiin inay ka tanaasulaan nabadda ama geeddi-socodka horumarka marka la guda galo. Yamamoto iyo kuwa kale oo ka tirsan Waaxda Arrimaha Dibadda ee Afrika Xafiiska ayaa maal-galiyay sanado badan iyagoo raadinaya inay ka dhisaan Afrika burburka oo aysan diyaar u ahayn inay aqbalaan cadeymo cad oo muujinaya in howsha laga weeciyay.
Ma jiro tusaale cad oo aan ka ahayn Soomaaliya, halkaas oo rabitaanka ah in ganacsigu u socdo sidii caadiga ahayd ay u horseeday Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo hay’adaha kale ee dawliga ah inay lacag ku shubaan urur dawladeed oo hoggaamiyahoodu qaatay xagjirnimada isagoo da ‘yar, wuxuu ku eedeynayaa reer Galbeedka geeridiisa. aabe, wuxuuna haystay, labaatan sano hadda, si aan fiicnayn xiriir dhow ula lahaa xulafada al-Qaacida.
Si fudud haddii loo dhigo, illaa iyo inta uu Farmaajo xilka ka qaadayo Fahad oo ah madaxa Hay’adda Sirdoonka iyo Nabadsugidda Qaranka oo ay saraakiisha Soomaalida si kalsooni leh ugu baaraan xiriirkiisa argaggixiso iyo ku takri-fal awoodeed ee gudaha Soomaaliya, dowladda Mareykanka waa in ay ka gooysaa Soomaaliya dhammaan kaalmooyinka dowladda Mareykanka. Waxaa laga yaabaa in Safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ay dooneyso inay dhinaca kale eegto, laakiin Congress-ka ma ahan inay sidaas yeelaan.
Michael Rubin (@ Mrubin1971) waa tabaruce wax ku biiriyaha barta Baarayaasha Washington ee Imtixaanka Beltway. Waa aqoonyahan degan deegaanka machadka ganacsiga ee Mareykanka waana sarkaal horay uga tirsanaan jiray Pentagon-ka.
Previous articleFrance has two million Covid-19 cases
Next articleTrump orders troop cuts in Iraq and Afghanistan